नेकपा सचिवालय बैठकः पाण्डेको नेतृत्वमा प्रवास समन्वय कमिटी निर्माण, क–कसले पाए जिम्मेवारी ? | Ratopati
नेकपा सचिवालय बैठकः पाण्डेको नेतृत्वमा प्रवास समन्वय कमिटी निर्माण, क–कसले पाए जिम्मेवारी ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रवास समन्यव कमिटी निर्माण गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार नेतृ विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा प्रवास समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । कमिटीमा नेतृ पाण्डेलाई इन्चार्ज र लक्ष्मण पन्तलाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पार्टीका युवा नेता युवराज चौंलागाईलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ भने श्रीप्रसाद साह सचिव चयन भएका छन् । रुकु विक सदस्य चयन भएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अधिकार प्रत्यायोजनका अन्य विषयमा भने निर्णय नलिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
#नेकपा सचिवालय बैठकः